I-bungalow ehlaziyiweyo ngasehlathini, (ukuhlamba) ichibi, iindlela zokuhamba intaba
I-bungalow elungiswe ngothando kufutshane nendlela yokuhamba kunye nechibi elinendawo yokuhlala egadini
Sirenta ibungalow yethu efihliweyo eWaldsieversdorf.
I-bungalow (malunga nezikwere zeemitha ezingama-44, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela) isandula ukulungiswa, ifakwe i-insulated kwaye iyafudumala (inomdla kwiindwendwe zasebusika), kukho kwakhona umbane kunye namanzi.
(Akukho WiFi, kodwa kuhlala kukho ulwamkelo oluhle lweselula)
Kukho indawo encinci yokuhlala egadini. Ibarbecue / isitya somlilo sinokwenzeka ngolungiselelo.
Ukuba unomdla kwindalo, le yindawo efanelekileyo kuwe! Iindlela ezininzi ezintle zokukhwela intaba ngeMärkische Schweiz ziqala kanye phambi kwepropathi. Kukho iindawo zokunyathela amanzi eKneipp. IGr. I-Däbersee enechibi langaphandle kodwa kunye nolunye ufikelelo lwamanzi luyakumema ukuba uphole.
Ukuze kungabikho isithukuthezi "kwimozulu embi", kukho isiginci, incwadi encinci kunye nekhabhathi yemidlalo kunye neqela leeDVD kunye ne-SNES console. Unako ukuqhagamshela izixhobo zakho kumabonakude usebenzisa intambo yeHDMI.
Ukuba unomdla, siya kukuvuyela ukukunika i-easel kunye / okanye izixhobo zokupeyinta.
Ukusuka kwindawo yokujonga, iCafe Tilia kukuhamba nje imizuzu emi-2 kwaye ibonelela ngamaqebengwana amnandi asekhaya. Kukho ivenkile encinci yengingqi ekungeneni kwelali. Amathuba amakhulu okuthenga anokufumaneka kwi-Buckow ekufuphi (apho kukwakhona indlela enhle yokuhamba) okanye eMüncheberg.
Sizithanda kakhulu izilwanyana kwaye sineekati ezimbini ezinobuhlobo, ezichitha ixesha elininzi kwigadi yethu kwaye zithembeke kakhulu. Ezi zizizathu zokuba ngelishwa awukwazi ukuza nenja nawe ...
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo - nceda usazise! "Sisebatsha kwishishini" kwaye ngokuqinisekileyo silibele iinkcukacha ezimbalwa ...
:-) Sijonge kuwe! :-)
Kuba kukho ikhabhathi eneglasi ekhitshini ... i-bungalow yethu ayikhuselekanga kubantwana abaselula. Kodwa ukuba ufuna ukuza nomntwana omncinci, kufuneka uqaphele. Sinebhedi yokuhamba.
Singakunika ibhedi esongwayo 90x200cm, ukuba ungathanda ukuza njengesithathu. Ungayibeka kwigumbi lokuhlala (iya kuba ngqingqwa kodwa ilingana :-)).
Kuba ngamaxesha athile sisakha phezu kwendlu yethu (akukho ngcoliseko lulindelekileyo!), Sisenengqumba encinane yengqushu emva kwe bungalow.
Indawo elungiselelwe ukusebenza: isikrini sekhompyutha, idesika
Amachibi kunye namahlathi
uyakuhlala ekhona umntu oneselfowuni, kodwa kusoloko kukho umntu ekhaya kwaye nabani na onkqonkqozayo uyakuvuyela ukuvulwa :-)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Waldsieversdorf